एक चर्चा: अन्तर्राष्ट्रिय तामाङ परिषद्को चौथो सम्मेलन
२०७५ मङ्सिर १५ शनिबार ०१:१४:२१ मोहन गोले तामाङ
यतिबेला हामी अन्तर्राष्ट्रिय तामाङ परिषद्को सम्मेलन नजिक पुगेका छौ । सन् २०१८ डिसेम्बर १४, १५ र १६ मा परिषद्को चौथो सम्मेलन सम्पन्न गर्न भारतको पर्यटकिय स्थल दार्जिलिङ मिरिकमा ब्यवस्थापनको तीब्र तयारी भइरहेको सूचनाहरु प्राप्त भइरहेका छन् । सम्मेलनमा नेपाल, भारत, भुटान, बर्मा लगायत संसारका डेड दर्जन बढी मुलुकको सहभागिता रहने आयोजकको आँकलन छ । चौथो सम्मेलनले मुख्यगरी आगामी ४ बर्षको लागि नयाँ नेतृत्व चयन गर्नुका साथै विधान, संस्कार संस्कृति निर्देशिका, चन्द्रपात्रो र भावी कार्य योजना सम्बन्धि महत्वपूर्ण निर्णयहरु गर्नेछ । त्यसैले यतिबेला संसारका तामाङहरुले यो सम्मेलनलाई नजिकबाट हेरिरहेका छन् । मेरो बिचारमा दुनियाँको यसपटकको हेराई परम्परागत ढंगको छैन, अलि भिन्न खालको छ । यसपटक सम्मेलनबाट को नेता छानिने भन्दापनि यसको मुख्य नीति तथा कार्यक्रम के हुने र यसले सबै तामाङ संघ÷संस्थाहरुलाई कसरी समेटेर अघि बढ्छ होला भन्नेमा बढी केन्द्रीत भएको देखिन्छ । यदि यो पटक पनि परिषद् नयाँ योजनाका साथ अघि नबढ्ने र यसले सबैको भावनालाई जित्न नसक्ने हो भने सम्भवत परिषद्को इतिहासमा यो सम्मेलन महंगो पर्न पनि सक्छ । त्यसैले यस्तो नहोस् भन्नाको लागि सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा तामाङ समुदायका शुभचिन्तक, बुद्धिजीवी, बौद्धिक ब्यक्तित्वहरु लगायत आयोजक संघ/संस्थाहरु परिषद्को विधान र भावी कार्यक्रममा बढी केन्द्रीत भएर गम्भीरताका साथ छलफलमा जुटेका छन् । संसारको कुनाकुनाबाट सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार प्रविधिको माध्यमबाट सुझावहरु पनि प्राप्त भइरहेका छन् ।
किनकि सन् २००२ मा पहिलो सम्मेलनबाट स्थापना भएको अन्तर्राष्ट्रिय तामाङ परिषद्ले अहिलेसम्म १६ बर्षभन्दा बढी समय ब्यतित गरिसक्यो । १६ बर्ष पुगेपछि नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिइन्छ । यसलाई आधार मानेर हेर्ने हो भने यो तरुण अवस्थामा प्रवेश गरिसक्यो । तर काम हेर्दा बच्चै छ । यो समिति सक्रियताका साथ अघि बढेर बर्षहरु नखप्टिएको भए अहिले हामी पाँचौ सम्मेलनको नजिक पुगेको हुन्थ्यौ होला । भारत र नेपालमा मात्रै आयोजना नगरेर संसारका अरु २ वटा मुलुकमा सम्मेलन आयोजना भइसकेको हुन्थ्यो होला र बिधानतः आयोजक राष्ट्र अध्यक्ष बन्ने प्रावधान मुताविक अरु २ वटा देशले परिषद्को नेतृत्व गरिसकेको हुन्थ्यो होला । म तीनवटै सम्मेलनहरुमा सहभागी छु । बिगतको सम्मेलनहरुले तीनवटा महत्वपूर्ण घोषणापत्र जारी गरेको थियो । घोषणापत्र भनेको समस्त सम्मेलन प्रतिनिधि र निर्बाचित समितिको प्रतिवद्धतापत्र पनि हो । संसारका तामाङ जनता सामू उनीहरुले एकै ठाउँ भेला भएको अवसर पारेर घोषणा गरेको वाचा, कवोल हो । जुन पुरा गर्न सकेन भने त्यो कार्यकाल हाक्ने कार्य समितिको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठ्छ । लज्जाको विषय बन्छ । तर हामीले घोषणापत्रलाई कवोलपत्रको रुपमा नलिएर सम्मेलन सकिएपछि पत्रकार सम्मेलनमा बाँड्ने सामाग्रीको रुपमा मात्रै लियौ । जसले गर्दा घोषणापत्र जयनन्द लामाको गीतमा आँखाको रमझम, मन चमचम भने जस्तो दुनियाँलाई केही दिन देखाउने वस्तु मात्रै बन्यो । जारी ग¥यो, सकियो । जारी भएका सबै घोषणापत्रमा तामाङको लागि कायापलट गर्ने अक्षर खोपिएको पढेका थियौ । बर्षमा १, २ वटा बैठक, छलफल, गोष्ठी बाहेक अरु काम गर्न सकेनौ । अन्तर्राष्ट्रिय परिषद् जस्तो संसारलाई समेट्ने संस्था नेपाल र भारत वरिपरि मात्र घुमिरह्यो । सम्मेलन अवधिमा नेताहरु सके आफै हुने, नसके आफ्नोलाई बनाउने एक सुत्रीय एजेण्डा बोकेर लिगलिगकोटको दौडमा लागे । अरु प्रतिनिधिहरु जसलाई आफू बन्नु पनि छैन र कसैलाई बनाउनु पनि छैन भने उनीहरु नयाँ ठाउँमा बाहिरफेर घुम्ने, नयाँ साथी बनाउने र नयाँ सिनको ब्याकग्राउण्डमा सेल्फी हान्नेमै ब्यस्त भए । यसकारण घोषणापत्रमा के लेखियो ? नीति, कार्यक्रम के बन्यो ? सम्मेलनबाट कस्ता योजना छानियो ? त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने ? भन्ने मुख्य विषयमा ध्यान पुग्न सकेन । जसलाई चासो थियो, उसले सम्मेलनको बन्दसत्रमा जति ल्याए, त्यति मात्र सीमित प्रतिनिधिको बीचबाट ताली बजाएर पास गरियो । पत्रकार सम्मेलनमा त्यही वाचन गरियो । केही दिन अखवार र सामाजिक सञ्जालमा सस्तो मसला बन्यो, सकियो । मेरो चिन्ता र चासो के हो भने, अब त्यस्तो नहोस् । अब पनि त्यस्तै भयो भने दुनियाँको विकसित चेतनाले यस्तै हो भनेर त्यस्तैमा सस्तै छोड्ने छैनन्, बिकल्प खोज्नेछन् । मैले यति गम्भीरताका साथ यो पक्षलाई किन उठाउँदैछु भने हाम्रो फेरिपनि ध्यान यसतर्फ गइरहेको छैन । केही दिन अघि परिषद्का संस्थापक अध्यक्ष तथा अगुवा नेता परशुराम तामाङ ज्यूले सामाजिक सञ्जालमा अन्तर्राष्ट्रिय परिषद्को बारेमा सल्लाह, सुझाव माग्नुभएको उहाँको वालमा देखेको थिएँ । तर उहाँको त्यो पोष्टमा सकारात्मक सुझाव दिनेहरु एकदमै कम र खिसी गर्ने, ब्यंग्य गर्नेको संख्या बढी देख्दा दुःख लाग्यो । सुझाव दिनेमा पनि साँच्चै उहाँको अपेक्षा अनुसारको सुझावरु थिएनन् । त्यसकारण यतिबेला सबैजना गम्भीर बनौ । ठण्डा दिमागले सोचौ । परिषद्को नेतृत्व अहिले कसैले गरेको होला, भोली सम्मेलनपछि कसैले गर्ला । तामाङकै छोराछोरीले गर्ने हो, त्यो ठूलो कुरा भएन । उसको टाउकोलाई दोष देखाएर आफू पन्छिनु भनेको सारमा हामी आफै पनि पन्छिनु हो । हामी आफूले आफैलाई धोका दिनु हो । मेरो अनुरोध छ, त्यस्तो आत्मघाती काम नगरौ ।
हो, कमजोरी धेरै भएका छन् । १६ बर्षको परिषद् इतिहासले हामीलाई धेरै सिकाएको छ । कतिपय ब्यवहारिक रुपमा प्रयोग गर्दा असफल भएका अभ्यासहरु हामीसँग छ । यसलाई पाठको रुपमा लिऔ । प्रतिनिधिमूलक हिसावले यस अघिका सम्मेलनमा १३ वटासम्म देशको प्रतिनिधित्व त गरायौ तर ती देशमा क्रियाशिल संस्थाहरुलाई परिषद्मा आवद्ध गराएर लान पनि सकिएन । यसो गर्न नसक्नुमा मुख्य नेतृत्वको मात्रै कमजोरी होइन, समग्र टिमको इच्छाशक्ति र संगठनलाई चलाउने विधानको दायरा पनि मुख्य कुरा हुनसक्ला । किनकि ब्यक्तिलाई दोषी देखाउनु सजिलो हुन्छ तर एउटालाई दोष देखाएर हामी अर्को ब्यक्ति छान्ने होडबाजीमा मात्रै लाग्यौ भने फेरिपनि हामी असफल हुन्छौ । संगठन न हुकुम, आदेशले चल्छ न भावनाले नै चल्छ, संगठन त योजनाले चल्ने हो । लक्ष्य, उद्देश्य सही बन्यो भने चल्छ । नीति, कार्यक्रम र त्यसमा सबैको सहकार्य भएर चल्ने हो । यसकारण हामीले तामाङ चेतनाको जगमा टेकेर बदलिदो विश्व दुनियाँको सन्दर्भलाई ठीक ढंगले विश्लेषण गर्दै नविन योजनाहरु अघि सार्नुपथ्र्यो । योजना मुताविक नीति, कार्यक्रम बन्नुपथ्र्यो । तामाङको राजनीतिक मुद्दामा के गर्ने ? सामाजिक मुद्दामा के गर्ने ? ती लक्ष्यहरु प्राप्तीको लागि ककसको जिम्मेवारी, भूमिका के हुने ? भन्ने स्पष्ट हुनुपथ्र्यो । मेरो बुझाईमा परिषद् आफैमा संसारको तामाङहरुको तागतलाई एकत्रित गरेर समुदायको लागि राज्य र बाह्य शक्ति बिरुद्ध संघर्ष गर्ने संस्था हो । तसर्थ, हाम्रो मुख्य दुश्मन को हो ? हाम्रो आन्दोलनको रणभूमी अर्थात केन्द्रबिन्दू कहाँ हुनुपर्ने ? किटान गर्नुपथ्र्यो । यसका साथै तामाङ समुदायले बिगत लामो समयदेखि लड्दै आएको ताम्सालिङ प्राप्तीको सवाल, तामाङ संस्कार, भाषा र तामयीग लिपि जस्ता कुरामा दह्रो खुट्टा टेक्ने नेतृत्व चयन गर्नुपथ्र्यो । तर न तामाङ चेतनालाई ठीक ढंगले बुझ्यौ, न समसामयिक परिस्थितिको सही विश्लेषण ग¥यौ न दह्रो योजना नै बनायौ । भावनामा बगेर सबै कुरा गर्ने भनेर घोषणापत्रमा लेखियो तर काम एउटै भएन । कार्यालय समेत ब्यवस्थित ढंगबाट चलाउन सकेनौ । तामाङ विकास बैंक खोल्ने भन्यौ तर सहकारी दर्ता गर्ने हिम्मत पनि गरेनौ ।
अहिले हामी चौथो सम्मेलनको नजिकमा आइपुग्दा पनि यस्ता विषयहरुमा गम्भीर भएर छलफल गरिरहेका छैनौ । भावी कार्य योजना बनाएका छैनौ । राजनीतिक परिस्थितिसँग कसरी जुध्ने ? विश्व भूमण्डलीकरणको सुनामीबाट, त्यसको डरलाग्दो छालहरुबाट तामाङलाई कसरी बचाउने ? प्रतिरोधी हतियारहरु निर्माण गरिरहेका छैनौ । म सुन्दैछु, फेरि ब्यक्तिमा केन्द्रीत भएर डिस्कोर्सहरु चल्न थालेका छन् । बजारमा पदहरु बण्डा हुन थालेका छन् । आआफ्नो भोट गिन्ती सुरु भएको छ । यत्रो तीनवटा सम्मेलनहरु सम्पन्न गरिसकेको संस्था किन चल्न सकेन ? यसको मूल समस्या पक्षतिर ध्यान पुगेकै छैन । यदि साँच्चै समस्यामा हामी केन्द्रीत हुने र अब परिषद्लाई सशक्त बनाउने हो भने सवैभन्दा पहिले तेश्रो अन्तर्राष्ट्रिय तामाङ सम्मेलनद्वारा जारी काठमाडौं घोषणापत्र कार्यान्वयन हुन नसक्नुको मुख्य कारण पत्ता लगाउनु पर्छ (हेर्नुहोस् तेस्रो सम्मेलनको घोषणापत्र) । नत्र फेरि मिरिक घोषणापत्र जारी गरेर पत्रको संख्या बढाउछौ होला तर काम हुँदैन । यसको गम्भीर आत्मसमिक्षा सहितको प्रतिवेदन बर्तमान नेतृत्वले हलमा पेश गर्नुपर्छ । परिषद्को पदाधिकारीमा निर्बाचित भएर आफैले प्रतिनिधित्व गरेको संस्थालाई परिषद्को आवद्ध सदस्यता दिलाउन नसक्नुको कारण के हो ? के ले रोक्यो ? विधानले, अध्यक्षले वा अरु कुनै कारणले त्यसको जवाफ लेख्नुपर्छ । त्यस्ता अप्ठ्याराहरुलाई कसरी पन्छाउन सकिन्छ ? त्यो बिना पूर्वाग्रह खुलाउनु पर्छ । त्यो समिक्षाले मात्रै आगामी यात्रा तय गर्छ नत्र आउने नेतृत्वको पनि सोही दशा हुनेछ । यो भनेको झाँडी फाड्ने जस्तै काम हो । त्यसपछि दोस्रोमा झाँडी फाडिसकेपछि जोत्ने, बीउ बिजन रोप्ने र मल हाल्ने कामको सुरुवात हुन्छ । यो भनेको योजना निर्माण गर्ने हो । तेस्रो सम्मेलनबाट निर्बाचित भएर सन् २०१३ देखि २०१८ सम्म काम गरेको नेतृत्वले सांगठनिक कामको सिलसिलामा एउटा चरणको काम गरिसकेको हुन्छ । यो अवस्थामा एउटा अनुभव बटुलेको पुरानो नेतृत्वले आउने भावी नेतृत्वको लागि प्राथमिकताका योजनाहरु देखाउन सक्छन् । तसर्थ, बुँदागत रुपमा प्रतिवेदनमा छनौटका योजनाहरु लेखिदिनुपर्छ । सामाजिक पाटोमा गर्ने काम र राजनीतिक पाटोमा गर्ने कामको बारेमा प्रष्ट हुनुपर्छ । गोलमटोल र भावना लेखेर हुँदैन ।
एक त अन्तर्राष्ट्रिय परिषद् जस्तो देशदेशबाट प्रतिनिधित्व भएर बन्ने संगठनको नियमित बैठक बस्ने, सम्मेलन÷सभा गर्ने जस्ता कुराहरु अरुको भन्दा जटिल हुन्छ । त्यसैले मिरिक सम्मेलन तामाङ समुदायको लागि ऐतिहासिक अवसर हो । यसलाई नेता छान्ने सम्मेलनको रुपमा मात्रै नलिऔ । यस्तो अवसरको संयोग पटक पटक मिलाउनु सकिदैन । ४, ५ बर्षमा एकपटक आउँछ । यो अवसरलाई सदुपयोग गरौ । संसारको तामाङहरुले एउटा आशा र उत्साहका साथ सहभागिता जनाएको अन्तर्राष्ट्रिय परिषद्को चौथो सम्मेलनलाई आशा, आशा निराशामा नबदलौ । परिषद्को १६ बर्षे इतिहासमा केही गरेन भन्नेहरुलाई सुनारको सय चोट, लोहारको एकै चोट भन्या जस्तो बलियो झापड हान्ने अवसरको रुपमा चौथो सम्मेलन सावित हुन सकोस् । सफलताको अग्रिम शुभकामना । थुजेछे, फ्याफुल्ला ।।
तेश्रो अन्तर्राष्ट्रिय तामाङ सम्मेलनद्वारा जारी काठमाडौं घोषणापत्रको पूर्ण पाठः
काठमाडौंमा २०५९ पौष ४–७ गते सम्पन्न प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय तामाङ सम्मेलनद्वारा पारित काठमाडौं घोषणापत्रको मूल मर्म, लक्ष्य, सिद्दान्त र उद्देश्यलाई पुनर्पुष्टी गर्दै,
भारतको दार्जीलिङमा (१५–१८ डिसेम्बर, सन् २००५) मा सम्पन्न दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय तामाङ सम्मेलनद्वारा पारित तामाङ स्वः विकासको अवधारणा र कार्ययोजनाहरूप्रतिको प्रतिवद्धतालाई दोह¥याउदै, विश्वमा भएको सूचना र प्रविधिको विकास, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय साँस्कृतिक अतिक्रमण, नवउपनिवेशवाद, आर्थिक उदारीकरण, भूमण्डलीकरण, तामाङहरूको मुख्य आवादी रहेका नेपाल, भारत, भूटान, बर्मा लगायतका विश्वका धेरै देशहरूमा भएको जनताको मुक्ति आन्दोलन र राजनीतिक परिवर्तनलाई दृष्टिगत गर्दै, हामी काठमाडौंमा २०६९ चैत्र ३, ४ र ५ गते नेपाल तामाङ घेदुङको आतिथ्यतामा अन्तर्राष्ट्रिय तामाङ परिषदद्वारा आयोजित तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय तामाङ सम्मेलनमा सहभागी भएका विश्वका विभिन्न देशका तामाङ संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरू विभिन्न विषयहरूमा बहस, छलफल र विचार÷विमर्शपछि निम्न कार्यक्रममा सहमत भई प्रभावकारी रुपमा लागू गर्ने प्रण गर्दछौं:
१) तामाङको पहिचान र राष्ट्रिय सम्मान, अन्तर्राष्ट्रिय तामाङ परिषद्को अभियान आगामी पञ्च वर्षीय कार्यक्रमको मूल नारा र साँस्कृतिक पुनर्जागरण मूल विषय हुने ।
२) २० वर्षे तामाङ स्वः विकासको अवधारणालाई अन्तर्राष्ट्रिय परिषद्का सदस्यहरूले आ–आफ्नो परिस्थिति र क्षमता अनुसार कार्य योजना बनाई लागू गर्ने ।
३) तामाङहरूमा रहेको अत्यधिक विपन्नतालाई समाप्त गर्न तामाङहरूको श्रम र व्यवसायलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रुपान्तरण गर्नु आवश्यक भएकोले राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय तामाङ विकास कोष÷बैंकको स्थापना हेतु देशी तथा बैदेशिक स्रोत–साधन परिचालन गर्ने र स्थानीय स्तरमा एक गाउँ÷टोल एक सहकारीको व्यवस्था गर्ने ।
४) धर्म र सँस्कृति वीचको भिन्नता र सम्बन्धलाई पर्गेल्दै विभिन्न मुलुक र स्थानका तामाङहरूको सँस्कारमा रहेको भिन्नतालाई एकरुपता ल्याउनु र कतिपय प्रचलनलाई समयानुकुल बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय तामाङ सँस्कार सँस्कृति निर्देशिका लागू गर्ने र विवाह संगठन नै तामाङ समाजको एकताका आधार र समतामूलक समाजको बिशिष्ट संरचना भएकोले यसै निर्देशिकामा संलग्न अनुसूची–१ मा उल्लेखित स्वाँगे सम्बन्धी व्यवस्था, हिजो अन्जानमा भएका वैवाहिक सम्बन्धलाई विर्सदै, अव आइन्दा कडाईका साथ लागु गर्ने ।
४) तामाङ शब्दकोष निर्माणको काम प्रारम्भ भएको तर नसकिएकाले १ वर्षभित्र पूरा गर्ने ।
५) यो हिमाली भू–भागको ताम्सालीङ हामी सम्पूर्ण तामाङहरूको साझा आदि (उत्पत्ति) थलो भएको र यहीबाट विभिन्न राज्यका सीमारेखाहरू निर्धारित हुनुभन्दा अगाडि नै फैलिएको र यो पुण्यभूमि जहाँ हाम्रा पूर्वजहरूले जीवन बिताए, हाम्रा देवीदेवताले बास गरे, जहाँ हाम्रा काअीरन र गाथाहरु जन्मे र इतिहासको सृजना भयो, जहाँ हामीले आफ्नो भाषा हुर्कायौं, चाड र उत्सवहरु मनायौं र जहाँबाट हाम्रो भौतिक र साँस्कृतिक अस्तित्व फैलियो, जहाँबाट हामीले प्रकृतिलाई अनुकुल बनाउन आफ्नै खाना, बस्न, लाउन, औषधीमुलो, ज्ञान, विज्ञान, प्रविधिको विकास ग¥यौं र यही नै हाम्रो सभ्यताको पहिलो दियो थियो र भावी तामाङ सन्ततीहरुको पहिचान र साँस्कृतिक अस्तित्वको आधारका रुपमा बलिरहने हाम्रो आस्था र विश्वास भएकोले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा ‘ताम्सालिङ स्वायत्त प्रदेश÷राज्य’ निर्माण गर्ने संघर्षलाई यो सम्मेलन जोडदार ऐक्यवद्धता र समर्थन गर्दछ ।
६) तामाङ जातिको सँस्कार, सँस्कृति र धर्मको अभ्यास, संरक्षण, प्रबद्र्धनका लागि तामाङ सामुदायिक साँस्कृतिक केन्द्र, बौद्ध विश्वविद्यालय, मातृभाषामा शिक्षाको व्यवस्थाका लागि नेपाल, भारत, भूटान, म्यानमार लगायतका सरकारलाई यो सम्मेलन आह्वान गर्दछ ।
७) हरेक व्यक्तिका मानव अधिकारलाई सम्मान गर्दै कतिपय कारणले तामाङ सँस्कार सँस्कृतिबाट विचलन भई तामाङ पहिचान र तामाङ समाजभित्र सामाजिक साँस्कृतिक सद्भाव खलबलिन पुगेकोले सम्पूर्ण तामाङहरुलाई आफ्नो आदिम परम्परागत सँस्कार, सँस्कृति, रीतिथिति र तामाङ धर्ममा फर्कन आह्वान गर्दछ ।
८) विभिन्न देशमा गठित तामाङ संघ÷संस्थाको नाममा विविधता रहेकोले सकेसम्म एकरुपता ल्याउन यो सम्मेलन आह्वान गर्दछ ।
९) विभिन्न मुलुकमा रहेका तामाङ र तामाङ संघ÷संस्थाहरूसंग समन्वय राखि आवश्यक स्रोत साधन जुटाई ग्रामिण समुदायमा रहेका विपन्न तामाङहरूको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक लगायतका विकासका लागि विविध कार्ययोजनाहरू तय गरी कार्यान्वयन गर्ने ।
१०) विभिन्न मुलकमा गई पेशा व्यावसाय तथा रोजगार गरी बसोबास गर्ने तामाङहरूलाई चेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र आपत विपतमा सहायतामुलक कार्यहरू गर्ने ।
११) उक्त कार्ययोजना के, कति, कसरी कार्यान्वयन भइरहेको छ ? सो कार्यान्वयनको स्थिति, प्रगति र कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा के कस्ता कारणले लागु हुन नसकेको हो ? सो को कारण र परिणाम समेतको आवधिक प्रतिवेदन सदस्य संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय तामाङ परिषद्को अन्तर्राष्ट्रिय तामाङ सभामा बुझाउनु पर्ने र सो प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी अन्तर्राष्ट्रिय तामाङ परिषद्ले विशेषज्ञ कमिटि मार्फत सम्बन्धित सदस्यलाई समाधानका उपायहरू सुझाव सिफारिस गर्ने ।
१२) तेस्रो सम्मेलनको आतिथ्यता गरी हामी सबैलाई सहभागि, विचार विमर्श, सदभाव र आत्मियता बढाउने पुनःअवसर प्रदान गरेकोमा यो सम्मेलन नेपाल तामाङ घेदुङलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ ।
घोषणा मिति: १८ मार्च २०१३, काठमाडौं ।